Forum serasera malagasy Ny fampandrosoana sy ny teny enti-mampianatra - Dinika forum.serasera.org
Ny fampandrosoana sy ny teny enti-mampianatra
Fitohizan'ny hafatra : Ny fampandrosoana sy ny teny enti-mampianatra
tsilan - 12/12/2003 14:30
Tokony ho teny gasy ihany ny teny fampianarana, satria ny 3%n'ny gasy ihany no miteny frantsay. Ny tantsha tokony ampandrosoina dia miteny gasy ranoray. Ny mpampandroso, avara-pi anefa miteny vahiny. lany amin'ny fanazavan-kevitra ny fotoana. Tsy mifandray matetika ny zavatra tian-kambara. Sahirana amin'ny fampandrosoana ny be sy ny maro.
Ny tokony atao, dia toy ny fandika ny baiboly sy ny hafa rehetra ihany. Tsy mila mitady teny tsy fampiasa, fa ny teny niorenany no adika amin'ny soratra gasy fotsiny dia vita, toy ireny teny hoe sekoly, jaona, baiboly sy ny sisa rehetra ireny ihany eh. Raha misy teny tiana ho vohizina vaovao dia alefa matetika amin'ny radio sy ny tele dia vita.
Sarotra ho an'ny zaza malagasy miteny gasy an-davan'andro ny mianatra amin'ny teny frantsay satria tsy fampiasany any an-trano io. Asa aloha fa tena betsaka ihany izay fivondronana nalehako izay fa tena sahirana na ny mpampianatra aza. Toa tsy ny valala be mandry hoy Rahila no arahina fa ny gisa mainty maneno.
isrine - 12/12/2003 20:04
Sarotra tokoa, ary tsy hita we inona no anohizana ny fampianarana.
Fa na izany tokony atao ny teny vahiny, mba mianatra teny vahiny ny tantsaha e!
tsilan - 13/12/2003 21:23
Ekeko saingy, ny manahirana dia lany andro amin'ny fandikana teny ny ankizy, fa tsy ny tena fahaizany no jerena.
Ny tany tatsinana manontolo mampianatra amin'ny teniny daholo, saingy mianatra teny hafa amboniny ho fifamezivezena amin'ny firenena hafa. Ny Soedoa izay 2 tapitrisa monja mianatra amin'ny teniny fa mianatra teny hafa koa. Fa tsy hoe ny teny enti-mampianatra no atao teny vahiny.
ikaretsaka - 13/12/2003 17:47
ilay handikana ny teny sasany amin'ny teny gasy koa ange mbola olana be eeee eo itsika no mikatso sy lany andro
satria vao eo fotsiny dia misy ireo sokajin'olona managasy teny vahiny... misy ny mandika azy ara-keviny sns.. dia iza no ampiasaina?
iza no manavanana kokoa ny gasy
hoe hiteny hoe
pompier sa atao hoe fiarampamonjihaintranosivoina ? na ny teny hoe paompy dia ho? vatolahimpivalandrano
na hoe pataloha de hoe salakamisimorotongotra?
ny teny s sasany aza efa tsy hita ny anaovana azy ko!
ny fahitako azy dia vao mainka aza tsy mahazatra ny ankizy sy hiteraka olana aminy ny mbola hianatra teny vaovao indray... ekena fa teny gasy ilay izy saingy vaovao aminy ko! na iny tambanivohitra tsy dia avara-pi aza ange mba manao hoe tomobil sy hoe taksi brosy fa tsy hoe fiarabempitondratambanivohitrahoaniandrenivohitrahivarotravokatra
eritrereto ihany fa aza etina amin-kirindoha fotsiny
kally - 13/12/2003 21:04
Io aloha dia zavatra mandeha tsikelikely e!ary ny tokony ezahina voalohany angamba ny mamoaka rki-bolana malagasy izay novolavolain'ireo manam-pahaizana manokana momba ny teny malagasy ka avy eo no hanatsoahana izay teny tokony tena hampiasaina .Mandra-piandry aloha dia terena ny ankizy hanaja ny teny malagasy ary hifehy ny teny vahiny fa tsy hanao vary amin'anana be fahatany.Mandratra sofina mihitsy mantsy ny mihaino ny sasany mihambo ery fa tsy mahay miteny gasy nefa rehefa asiana miresaka amin'ny teny frantsay tsy izy koa.Mahita matetika mihitsy aho eto teny lmifangaro toy ny :"en fait ,tsy hoe izay ny problème fa ilay situation tena ...".
isrine - 13/12/2003 16:25
Ny ahy alou, raha toa mampifangaro ny teny gasy @ vahiny za, de ny hampalaky ny resaka no ataoko, zany we, izay tsy hahalany fotoana ahy. Fa za tena tsy maharaka teny gasy firy, ohatra we: "pelaka, manapasaka" . Vao teto no nahalalako izany.
Ataoko fa samy miezaka ny hiteny gasy ny eto, fa mbola ao ihany ny maika lava e.
xxx - 14/12/2003 13:35
Sarotra ny hanovana ny teny enti-mampianatra ho teny malagasy ranoray satria ny ankamaroan' ny boky ampiasaintsika @ izao fotoana izao dia mbola @ teny vahiny.Mba diniho kely ange hoe ny Math,Phys,sciences atao @ teny gasy.Efa manana ny voambolana ampy @ izany ve isika.Ary mety tsy hisy intsony izany @ izay fotoana izay ny vary@anana ?
isrine - 14/12/2003 17:49
Zay alou de tena marina e; tsy vita @ teny gasy mihitsy ny fampianarana, sarotra be ny hamerenana izany. Izay hahavitana azy sisa atao e!
kally - 16/12/2003 17:16
Io dia araky ny nolazaiko tery ambony,mbola ezaka be izany fampianarana @ teny malagasy izany,nefa milazà ianareo raha mahita sekoly mampianatra @ teny vary amin'anana:na teny vahiny na teny malagasy no ampianarany fa tsy misy teny vary amin'anana izany.Nefa betsaka ny gasy mihambo ho tsy mahay miteny gasy.Miala tsiny aho fa ireny olona ireny amiko dia sarotra ny hampita fahalalàna ho azy,teny teneniny isan'andro aza tsy voafehiny ka inona no ho voafehiny?
isrine - 16/12/2003 20:25
Ny tsy fahaizana teny gasy koa ve de mampihambo! Fa misy ny teny gasy tena tsy fantatra mihitsy ny dikany raha tsy vao izao.
Tsy hoe tsy mahafehy ny teny gasy ny gasy fa te-hampiseho fa olona nianatra e.
Fa tairo teny gasy 100 % ary ny eto e. Nefa jereo na ny soratra sasany mipetraka eto @ namana aza tsy @ teny gasy, nefa i Hery efa miezaka ery ny hampiasa ny teny gasy.
kally - 17/12/2003 16:16
Hitan'i Isrine izany?Jereo izao raha misy teny vahiny ao anatin'io valin-teny nomenao io,ka ahoana?Raha manao ezaka kely fotsiny anie isika dia lasa foana io e!ary ekeko sy fantatro fa tsy mora izany.Fa miezaka arak'izay tratra miteny malagasy tsy misy fangarony.Tsy mahafinaritra?Teny malagasy tsy noforomporonina koa anefa an!
xxx - 18/12/2003 18:08
Rehefa tafita ny hevitra tiana hampitaina dia izay no zava dehibe. Misy zavatra tsy ho voadika amin'ny teny malagasy mihitsy satria tsy avy amin'ny foto pisainana malagasy no niaviany, dia aleo tenenina amin'izay mahaety azy izy. Atomboko amin'ny zavatra kely indrindra ohatra hoe "atome", hitan'ny razana taiza no nde hikaroka an'izany, tokony ho tsorina he "ataoma" fotsiny koa mba tsy hahasarotra ny fitadiava ny heviny aty aoriana. Raha manontany aho hoe inona no dikan'ny "takamoa" dia betsaka ny tsy hahalala fa izany, nefa hita andavanandro fa ny teny anondroana azy no samihafa amin'ny any anaty lesona.
isrine - 18/12/2003 20:19
x: fa raha io ataonao hoe "ataoma" io no andikana ny "atome" de hoy zahay avy any fianaranatsoa hoe: "automobile" no tinao tenenina. Eo @ tenimparitra koa anie de efa mahasarotra ny fampianarana e, tsy ho azon'ny any @ faritany avokoaa akory ny malagasy ofisialy.
tsilan - 06/01/2004 18:06
Tratry ny taona daholo. Tsara ny ady hevitra teto. Zavatra telo no azo amehezana ny fanantsarana ny teny gasy.
1 Ny teny tsy avy eto amintsika dia adika tsotra fotsiny toy ny hoe latabatra, ny sekoly teo aloha ihany. Ny ordinateur izany dia aoridinatera. Ny japanina aza miteny hoe informatique fa ny fanoratana no miova
2 Ny voambolana vaovao dia tokony aparitaka araka izay azo atao
3 Ezahina ny fampiasana ny boky novokarin'ny malagasy.
Marina hoe ny ankamaroan'ny boky ankehitriny @ teny vahiny. Tsy manahy izany satria na eran-tany aza dia @ teny sipanisy, na frantsay, na anglisy ihany ny tonta printy fanao, saingy tsy mahasakana ny firenena maro hianatra sy hampiasa ny teniny izany.
Ny tena olana dia atsy ho atsy rehefa hifampiresaka ny foko samihafa dia hiteny frantsay, satria ahoana no ahalalako ny raho sy ny rehe, na ren'ny tandroy sy ny mahafaly any. Dia toy ny atsy afrika indray.
fijo - 08/01/2004 12:26
marina ny an'i kally.fa raha ny teninao aza tsy voafehinao.inona intsony ny aminao?ny USA matoa mahay,dia mampiasa ny teniny.toa izany daholo ny tany mandroso.koa raha te handroso,dia fehezo aloha ny momba ny tena.
kroodlood - 05/03/2004 15:13
Tsy maintsy hoe ange hiafara @ fampiasana ny teny gasy ny fampianarana eto Mada .Zavatra mandalo fotsiny ihany izao teny "farantsiso " ampiasaina izao fa atsy ho atsy ,na dia somary haharitra aza, dia hiampy betsabetsaka ny olona tahaka ahy ka hanomboka hatreo ny fiovana !!!!
kroodlood - 05/03/2004 15:21